Best Price Action Trading PDF March 2021 | Download Now - Learn 2 Trade
Budata 2021 Ahịa Ahịa Ahịa PDF!
Best price edinam trading PDF 2021, niile ahụmahụ ahịa ka ojiji nke ala nke art oru egosi na ọkaibe chaatị ọgụgụ ngwaọrụ (ọzọ na ndị na-e mesịrị). Agbanyeghị, ọ bụ ezie na ụfọdụ nwere ike itinye uche na obere uru n'oge dị mkpirikpi, ndị ọzọ na-enwe mmasị iche echiche n'ihu n'ihu.
Mgbe ụfọdụ ọ nwere ike isi ike ịhụ osisi maka osisi, yabụ ọ nwere ike ịba uru maka gị ịlaghachi azụ ma tụleghachi usoro ndị ahụ. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, nke a bụ ịzụ ahịa ahịa.
Na ọnụahịa a na-ere ahịa PDF, anyị ga-akọwa ihe niile enwere ịma maka atụmatụ azụmaahịa. Ma ị na-achọ ịzụ ahịa azụmaahịa, ebuka, cryptocurrencies, ma ọ bụ ọla edo - anyị nwere olile anya na ntuziaka a ga-enyere gị aka inweta nghọta miri emi karị gbasara azụmaahịa ọnụahịa. N'ụzọ ahụ, ị ​​ga-eji ihe ọmụma niile ịkwesịrị ịmalite azụmaahịa dịka pro!
Gịnị bụ Ahịa Ahịa Ahịa?
Ahịa omume ahịa na-enyocha nkwụsịtụ, mgbanwe azụmaahịa na ọnọdụ nke ọnụahịa, karịa oge ụfọdụ. Nke a bụ ụzọ na-arụpụta ụzọ iji nweta ozi bara uru gbasara azụmaahịa ego.
Kama ịnwe ike ịlele ọnụahịa nke otu onye, ​​atụmatụ a na-ele anya maka etu esi akwụ ụgwọ ọnụahịa - dịka na mgbe ọ mere. Dịka ọmụmaatụ, ị nwekwara ike lelee eserese kandụl ndị Japan iji nweta nnụnnụ anya maka nke a.
Ahịa Ahịa Ahịa Ahịa Dị Mma
Dịka onye ahia, mgbe ịmalitere ịhụ ọnwụ, ihe mbụ ị kwesịrị ịme bụ iji ike ịchịkwa ihe egwu gị. Nke a pụtara imechi azụmahịa dịka na mgbe ị hụrụ na ọ dabara - na agbanyeghị ma ị nọ na acha ọbara ọbara ma ọ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Gbalịa ịghara ime ọtụtụ echiche ma ọ bụ ime mkpebi ndị na-enweghị isi. N'ụzọ dị oke mkpa, a na-azụ ma na-ere ọtụtụ ijeri dollar kwa ụbọchị site n'ahịa, site n'aka ndị na-adịghị eche echiche.
N'agbanyeghị ihe ahịa si ele anya na njikọta ego gị, omume ọnụahịa ga-atụle isi obodo ụwa na-aga n'ihu. Otu ihe atụ nke nke a nwere ike ịbụ nnukwu ụlọ ọrụ eletriki America na-azụ laptọọpụ sitere na Japan (JPY), ma ọ bụ ego na-agbakọ mbọ iji weghachite pọtụfoliyo ya na njedebe nke otu ọnwa.
Nzọụkwụ dị mkpa iji bụrụ nnukwu onye ahịa bụ ịmara onwe gị na njikwa ihe egwu. N'ihu n'ihu ọnụahịa a na-ere ahịa PDF, anyị ga-akọwa nke a nke ukwuu.
Kedu ihe bụ Mmetụta Egwu?
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, echiche ihe ize ndụ na-egosi mmetụta na ọnọdụ nke ahịa ego na-esonye. Goodzọ dị mma iji gosi ego ole ndị ahịa dị njikere ịfu, ma ọ bụ ego ole ha tụrụ anya ịme, bụ ịmụ ihe ha kpebiri ịzụta ma ọ bụ ree. Mmetụta ihe egwu bụ ihe ngosi nke ọkwa nke ndị ahịa na ndị na-achụ ego nwere mmasị iburu. Nnyocha ihe ize ndụ a bụ isi ebumnuche ahịa ahịa niile.
Ime ka imata banyere onodu ahia di elu karie inweta nsogbu ga enye gi otutu nghota karie ihe egwu i gha akwadoro iburu ego na ihe gi (n'ime oge).
Na-echeta mgbe niile na ọ bụrụ na ị nwere ọnọdụ oghere (n'ahịa), enwere ezigbo ohere na ahia gị nwere ike ịkwụsị na-acha uhie uhie. N'ihi ya, a kwenyere na enwere mmetụta abụọ pụtara ìhè nke na-edugharị usoro mkpebi onye ahịa. I kwutere ya - egwu na anyaukwu. N'ihi ya, ahịa ego nwere ike ọ ga - erite uru zuru oke na nke ahụ.
Ewere oke ọdụm na ahịa ego jiri obere oge n'uche. N'ezie, nke a pụtara na ị nwere ike ịbanye ngwa ahịa ngwa ngwa, ma pụọ ​​mgbe oge ziri ezi. Ọzọkwa nke a bụ naanị otu n'ime ihe ndị mere ị ga-eji nwee nghọta dị mma banyere ihe mmetụta ihe egwu dị. N'ikpeazụ, nke a na-egosipụta omume nke ndị ahịa na ndị na-etinye ego ma na-agwa gị ma ha nwere ike ịchọ nchekwa ma ọ bụ chọọ ihe egwu.
Egwu On - Gịnị bụ ya?
A ga-eji okwu ahụ bụ 'ihe egwu-' gosipụta otu ahịa nke na-achọ ihe egwu. Ọ bụrụ na enwere 'n'ihe ize ndụ' gburugburu ebe obibi; ndị ahịa na ndị na-achụ ego ga-akawanye mma na ịchọ nlọghachi dị elu. N'ọnọdụ ụfọdụ, nke a nwere ike ibute ịzụta 'ihe egwu-akụ', ma ọ bụ ire 'akụ-akụ' - nke a na-agbanwe isi obodo ka ọ bụrụ 'akụnụba'.
N'okpuru ebe a, ị ga-ahụ ọnụ ọgụgụ dịkarịsịrị ike nke akụ ndị dabara na nkwụnye ego 'dị oke egwu' (nke nwere ọnụahịa efu):
Ego dị elu, dị ka South African rand ma ọ bụ dollar New Zealand
Obere ihe ize ndụ ị na-ewe, obere nloghachi gị ga - adị ala - mana ọ bụ ezie na ọ ga - eme ka ihe egwu gị dị elu. Omume ọ bụla nwere mmeghachi omume.
-Egwu Egwu - Gini bu ihe a?
Mgbe ahịa 'na-achọ nchekwa' ka mgbasa ozi ego ga-eji nkebi ahịrịokwu ahụ 'n'ihe ize ndụ'. N'ihe banyere 'ihe ize ndụ', ọ ga-abụ na ọ ga-esiri ndị ahịa ike ịzụ ahịa dị egwu. Ihe atụ ọzọ nke 'ịpụ n'ihe ize ndụ' bụ mgbe ahịa na-egosipụta nnukwu volatility, yana amụma amụma akụ na ụba na-adalata adalata. Nnukwu ihe omume zuru ụwa ọnụ nwere ike inwe nnukwu nsogbu ndị ahịa na ahịa, yabụ - nke a ga - eme ka echiche ahịa ahụ 'bụrụ ihe ize ndụ'.
Offọdụ n'ime nnukwu mmetụta dị na ahịa ahụ bụ COVID-19, nnukwu nsogbu ahụike na-aza ụwa, esemokwu na Middle East yana nnukwu nsogbu ego nke 2008. Oge ọ bụla ọzọ ndị ahịa nwere ike ịbụ 'ihe ize ndụ-ịjụ', nke pụtara na ha na-ala azụ itinye ihe egwu. Na nke a, a na - enwekarị mmegharị dị iche iche abụọ ha nwere ike ịme, ndị a bụ:
Ndị ahịa nwere ike ịzụta (tinye ọnọdụ) akụ 'nchekwa-nchekwa'
Ndị ahịa nwere ike ree (ọnọdụ ọpụpụ) 'ihe egwu-akụ'
Ndị na-achụ ego nwere ike ịchọ 'ebe nchekwa' ma a bịa n'ahịa nke kachasị njọ. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na ha ga-enwekwu nchekwa karịa ma ọ bụrụ na akụ na ụba adịghị njọ. A na-eche ego siri ike ịbụ otu n'ime ebe nchekwa kachasị mma. N'oge egwu ego na enweghị mgbagwoju anya, ndị na-etinye ego na ndị ahịa na-atụgharịkarị isi obodo ọ bụla ka ọ bụrụ akụ 'nchekwa'. Nke a bụ n'ihi na akụ 'obere ihe egwu' na-enye ụgwọ ọrụ dị ala, mana nke a bụ nke enweghị nsogbu.
Ebumnuche dị n’azụ nke a bụ imepụta ‘nchụso n’ihe egwu’ iji chekwaa isi obodo. Ọ bụrụ na, dị ka ọtụtụ, ị nweghị mmasị na ego mpaghara gị dị ka 'ebe nchekwa' mgbe ahụ, ụfọdụ ụzọ ndị ọzọ maka ịtụle gị:
Isi ihe kpatara eji echebara akụrụngwa ndị a echiche dị ka 'ebe nchekwa' bụ n'ihi n'agbanyeghị agbanyeghị ọnọdụ akụ na ụba dị, akụrụngwa ndị a kpọtụrụ aha ga-eweta uru dị mkpa ndị mmadụ na-achọ mgbe niile.
Fọdụ n'ime oghere ego ga-arụ ụka na ebuka na ngalaba nlekọta ahụike, yana ngalaba ndị na-azụ ahịa, bụ akụ na-echedo echedo - nke ana - akpọ 'nchekwa-havens' maka ndị ahịa ahịa.
Gini mere mmetuta ihe egwu ji di oke mkpa?
Inwe ezi nghọta banyere otu mmetụta mmetụta ihe egwu si arụ ọrụ ga-enyere gị aka ichekwa isi obodo gị site na ijikwa ihe egwu na mmetụta ọ bụla metụtara. Ya mere, na nke a n'uche, nkebi a nke price edinam trading PDF ga-n'ihe ize ndụ echiche lekwasịrị anya. Iji nye gị ezigbo echiche nke ihe kpatara ahịa nwere ike iji na - eme otu ọ dị, ị kwesịrị ịmụ echiche dị egwu. Ahịa ga-agbago na ala, na-agbanwe kwa ụbọchị, nke a ga-egosipụta nke a n'echiche dị egwu.
Iji nwee nghọta nke data akụ na ụba na akụkọ gbasara ego kachasị ọhụrụ, nghọta gị banyere mmetụta dị egwu kwesịrị inyere gị aka izere ụjọ ụjọ ego n'agbanyeghị enweghị nsogbu. Mgbe ụfọdụ echiche ihe egwu na-agbanwe nwayọ nwayọ, oge ụfọdụ ọ na-adị ngwa ngwa. Site n'oge ruo n'oge ahịa nwere ike ịbụ 'ihe ize ndụ' ruo ọtụtụ ụbọchị ma ọ bụ ọnwa ole na ole, wee gbanwee na mberede na ọnọdụ 'ihe ize ndụ'.
Mana site n'iji echiche egwu dị egwu, ebe ị na-elekwasị anya na akụkọ ahịa, ị na-enwe ohere ka mma nke ịghọta nghọta na mgbagwoju anya mgbe ụfọdụ a na-akọ na mgbasa ozi ego. Mgbe enwere ihe ndekọ akụ na ụba akụ na ụba na nkwalite iji meziwanye ọnọdụ akụ na ụba, enwere ike ọ ga-abụ obere mgbanwe na ebumnuche ihe egwu.
Mgbe a tọhapụrụ data gburugburu ebe obibi akụ na ụba ma ọ dabere na ahịa, akụkụ ma ọ bụ akụ na ụba na-adalata adalata, nke a nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu na mmetụta ihe egwu ahụ ma were ya dị ka nsonaazụ na-akụda mmụọ. Gba ozi ọma na-eweta nnukwu ọdịiche na mgbanwe n'echiche nke ihe egwu, ma n'ọnọdụ ahụ, ahịa nwere ike ileghara data ahụ bipụtara anya ma gaa n'ihu ịzụta akụ dị egwu n'agbanyeghị!
Mgbe ahịa gbanwere n'ọnọdụ 'ihe ize ndụ', nke a bụ mgbe onye na-azụ ahịa oge nwere ike ree ihe ọghọm ọ bụla, mana jigide akụ 'nchekwa-nchekwa'. Nke a nwere ike ibute mmechi ọnụahịa gị na-egbochi, nke ga-egbochi ihu ọ bụla dị mkpa. N'ezie, enwekwara ohere na ọnụahịa ga-amalite ịdaba na ọnụego ngwa ngwa.
N'iburu nke ahụ n'uche, akụkụ na-esote nke ọnụahịa anyị na-ere azụmaahịa PDF na-eleba anya etu esi atụ mmetụta echiche dị n'ihe egwu.
Kedu otu esi atụle mmetụta egwu?
N'agbanyeghị ma ị nọ n'ọnọdụ 'ihe egwu ma ọ bụ na' ịnwe nsogbu ', mgbe ị na-azụ ahịa n'ime' ahịa dị ndụ 'ịkwesịrị ilezi anya maka ụfọdụ ụzọ dị mkpa (lee n'okpuru). Ha ga - enyere aka ma ọ bụrụ na ị ghọta echiche dị ize ndụ na mmetụta ọ nwere ike inwe.
US-Dabere Stock Indices
Site na isi ihe niile na-ezo aka na ya iji kpachara anya, ihe ngosi ahịa na US bụ otu n'ime ihe kachasị egosi.
Fọdụ n'ime nyocha akwụkwọ US kachasị ebe niile bụ ndị a:
S&P 500 (ardskpụrụ na Poor, ndepụta ahịa ahịa)
Dow Jones Industrial Nkezi (DJIA)
Ndenye aha ndị edepụtara n'elu abụghị maka ahịa US, ha bụ maka akụnụba ụwa niile. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịmụ akụkọ gbasara nghazi nke akara ngosi ndị a na - aga - ị ga - ege ntị na ntanetị mgbasa ozi ego n’oge dị iche iche kwa ụbọchị, dịka ọmụmaatụ, CNBC, MarketWatch, Reuters na Bloomberg.
Kedu ihe bụ akụ US?
Iji nweta ego ka ha nwee ike ịkwado ọrụ dị iche iche ma ọ bụ rụọ ọrụ kwa ụbọchị, US Treasury ga-ewepụta agbụ. A na-akpọ nkekọ gọọmentị US mgbe ụfọdụ T-ego, na-ahapụ nkekọ ya n'afọ niile.
N'iburu itinye uche n'uche, A na-ahụ Ahịa US dị ka akụ 'nchekwa', n'ihi na ha dị nso na enweghị ihe ọghọm dịka mmadụ nwere ike inweta. N’okpuru, anyị edepụtarala ụdị nchekwa dị iche iche 3 nke ejiri ego ha arụ ọrụ ndị a:
Akụ na-ekwu, sị: - aka T-note. Ofu-ọnụego ụgwọ ụgwọ ntozu okè: 1-10 afọ.
Akekọ agbụ: - aka T-agbụ. Ntozu oke nchekwa nchekwa ụgwọ: afọ 10-30).
Ego ego: - aka T-ego. Ntozu oke nchekwa nchekwa ụgwọ: 1 afọ na n'okpuru.
Ọrụ ego ọ bụla na-akwụ ụgwọ ya n'ụzọ dị iche, yana dịka ị nwere ike ịhụ site na ndepụta anyị dị n'elu, nke ọ bụla nwere ogo ntozu eto eto. Nke a dịgasị iche site na ọnwa ole na ole ruo iri afọ atọ. Lezie anya maka akụkọ mgbasa ozi ego na mkpụrụ dị iche iche.
Ọ bụrụ na mkpụrụ dị elu, ọ ga-abụ na ahịa na-erepụ ụgwọ gọọmentị, mkpụrụ ha na-akawanye mma ka ahịa ahụ daa. I nwere ike ijide n'aka na ire ngwa ahịa a na-enweghị ihe ọghọm na-egosi na ha nwere obi ike maka ọnọdụ akụ na ụba sara mbara, nke pụtara na ihe ọghọm ahụ gbanwere 'n'ihe ize ndụ', site 'n'ihe ize ndụ' ka mkpụrụ ha akala mma.
N'ihe banyere mkpụrụ na-agbadata, ihe ize ndụ ahụ ga-agbanwe na 'ihe ize ndụ', ihe ịrịba ama nke ụjọ n'ihi ịzụta ụgwọ gọọmentị dịka ihe ọzọ. N'ihi nke a, a ga-ebelata mkpụrụ ahụ n'ihi ahịa na-ebili.
Na nke a nke price edinam trading PDF anyị ga-enwe ọsọ ọsọ site na volatility index. A na-akpọkarị VIX, ndepụta a na-ele anya na ahịa nke otu ahịa na-eme mgbanwe na mberede ma ọ bụ na-atụghị anya ya na ahịa, yana ahịa edoghị anya.
N'ihe banyere inwe ezi nghọta banyere oke ihe egwu, 'na' ma ọ bụ 'gbanyụọ', ịnwere ike iji VIX mee ihe n'echeghị echiche ole nchegbu ndị ahịa na-eche. Fọdụ ndị na-ezo aka na VIX dị ka 'nlele egwu' ma ọ bụ 'ntụpọ ụjọ' n'ihi nke a, ọ ka bụ otu n'ime ndepụta ndepụta kachasị dị egwu nke volatility gafee osisi ahụ.
Dịka ọmụmaatụ S & P 500, enwere ike iji ya tụọ ahịa ahịa nke volatility na-aga n'ihu. Dị ka ọmụmaatụ:
Ọ bụrụ na VIX na-enye uru karịa 30, a ga-ahụ nke a dị ka ihe na-agbanwe agbanwe
Ọ bụrụ na nke a bụ 20 ma ọ bụ n'okpuru, a na-ahụta ya ka ọ dị jụụ.
Ihe dị elu na VIX dị, ka ahịa ahụ ga-atụ ụjọ, ya mere, nke a pụtara na VIX dị ala, ahịa ahụ ga-adị jụụ.
Anyị enweghị ike itinye ọnụ ahịa azụmaahịa PDF na ileghara ịkọwa ego! Ka emechara, ha bụ otu n'ime ngwa ego na-ebugharị ngwa ngwa n'ụwa niile.
Kedu ihe bụ Ego Nchekwa?
Dika anyi zoro aka na mbu, ego ndi ozo di nchebe na-emetuta mgbanwe mgbanwe echiche obula, ya mere ha na eme ngwa ngwa. Nke a pụtara na ha na-atụ anya na ego ahụ ga-ejigide uru mbụ ya, ma ọ bụ ịbawanye uru na mpaghara 'ihe ize ndụ'.
The Forex ahịa na-emeghe 24 awa n'ụbọchị, ụbọchị asaa n'izu, yabụ na-emegide US ahia ahia ahịa, na Forex ị nwere ike ịdebe mmetụta nke ihe egwu mgbe ọ bụla ịchọrọ ịlele.
Hụ okpuru ụfọdụ ego eji echekwa echekwa.
N'ihe banyere etu USD si sie ike, nke a bụ nnọchite zuru oke nke mmetụta 'ihe ize ndụ'. Ọ ga-abụrịrị na ahịa ahụ ga-enwe nnukwu mmechuihu ma ọ bụrụ na mgbasa ozi ego na data akụ na ụba ga-akọ na USD nwere ike karịa ego ndị ọzọ na-ekwenye ekwenye.
N'ọtụtụ oge, nke a ga - eduga n'ahịa na-ele anya na US dollar dị ka 'ebe nchekwa'. N'ụzọ na-akpali mmasị, mgbe nchịkọta nke ndị na-etinye ego na-eme nke a n'otu oge, nke a na-eduga na uru nke ịrị elu USD. Ọ bụrụ n ’ịtụle ịzụta akụ US (dịka‘ ebe nchebe ’), biko biko mara na ọ bụrụ na ịmebeghị ya, ị ga-azụta USD ụfọdụ iji zụta ihe ahụ.
Switzerland anọgidewo na-agbasi ike n'ọtụtụ nsogbu ego na afọ ndị gafeworonụ, Switzerland Franc (aka CHF) ka na-eburu ike dị ukwuu dị ka ego. Ọ bụrụ na mgbasa ozi ego na-akọ na ego siri ike na-ekwenye na-esighi ike karịa CHF - nke a nwere ike ịbụ ihe ngosi siri ike na e nweela ụdị ọgba aghara ahịa na Europe. N'okwu a, omume ahụ na-egosi ọnọdụ 'ihe egwu'.
Ndị amaara si n'ọtụtụ mba dị iche iche amatala na ha na-agbaba na ogwe aka nchekwa nke Switzerland n'oge nsogbu ego - ya mere a maara CHF dị ka 'ebe nchekwa' Nke a bụ n'ihi na ọ nwere akụ na ụba dị nchebe, usoro akụ na ụba na ego, ma ọ bụ kedu ihe a na-ahụta dịka obodo kwụsiri ike na ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Ọ bụrụ na ndị mgbasa ozi ego na-akọ na ego na-ekwenye ekwenye siri ike karịa Japanese Yen, akụkọ / data ga-abịa dị ka mmechuihu na ahịa. Karịsịa ma ọ bụrụ na akụkọ ahụ metụtara na dollar US, ahịa ndị ahụ nwere ike ile anya JPY dịka 'ebe nchekwa'.
Offọdụ n'ime ego ụzọ abụọ kachasị ewu ewu iji kwụọ ụgwọ mmasị pụrụ iche bụ:
N'ihe banyere ahia 'onwu-on' atụmatụ ahia, uzo ego a edeputara n'elu bu ndi a ma ama - ma o nwere ike ibu ihe mgbaàmà nke 'itughari ihe ojoo' ma oburu na odi ngwa ngwa.
Na a nnukwu ego nke ejighị n'aka na ụwa na-eche ihu n'oge a; ọ bụrụ na dịka ọmụmaatụ AUD / JPY na USD / JPY na-ebili, ahịa ahụ nwere ike ịgba ọsọ maka nchekwa, ma eleghị anya na EUR, JPY ma ọ bụ CHF, n'ihi na nke a bụ ihe na-egosi na agbanweela ọnọdụ 'ihe egwu'.
Enwere m ike ịzụta 100% Ngwongwo Na-adịghị Egwu?
O di nwute na mba, i nweghi ike. Dị ka loch ness ogologo anụ mmiri na nnukwu ụkwụ, 100% enweghị ihe ọghọm anaghị adị. Ohere nke ịnwe ihe na-enweghị ihe ọghọm agaghị ekwe omume, ebe ọ bụ na ọ nweghị nkwa ọ bụla na akụ ọ bụla ga-enwe nchebe kpamkpam na-adịgide adịgide.
N'ihe banyere ezigbo ego (aka oyi hard fiat cash), a ka nwere ihe ize ndụ nke onu oriri ji nwayọ na-emebi ikike ịzụta gị. Akụkọ ihe mere eme na-egosi na nke a emeela ọtụtụ oge. 'Egwu' na 'ihe ize ndụ' bụ ihe atụ nke omume ahịa, yabụ, ihe egwu a ga-adị adị n'agbanyeghị agbanyeghị.
Kedu ihe nyocha nke teknụzụ?
Iji eserese ọnụahịa kọwaa nkwado, nkwụsi ike na ịga n'ihu nke omume ọnụahịa - nyocha teknụzụ na-enyocha omume ọnụahịa n'oge gara aga, iji gbalịa ịkọ ihe nwere ike ime n'ọdịnihu. Site na nyochaa ọnụahịa eserese ịkọpụta oge na nguzogide, nyocha teknụzụ na-enyere ndị ahịa aka ịkọ azụmahịa ndị nwere ihe puru ime. Ya mere, nke a na - eme ka ọ dị mfe ịpụ ma banye ahịa ndị ahụ dabere na ihe puru omume.
Ọ bụ ezie na nyocha teknụzụ anaghị anwa ịlele uru dị na ya, ọ na-ahụ ụkpụrụ site na eserese ọnụahịa na njirimara teknụzụ, yabụ nke a na-emepụta ezigbo ntọala maka ịbanye na ịpụ ahịa. Omume ndị na-apụta apụta na mmegharị ọnụahịa ga-agbaso usoro guzobere eguzobe, nke a bụ obere ekele maka akparamaagwa ahịa. N'ikwu okwu n'ozuzu, ndị ahịa na-eme ihe n'ụzọ kwekọrọ na ya mgbe ha na-emeso ọnọdụ kwekọrọ.
Nyocha teknụzụ na nyocha bụ isi bụ ihe abụọ dị iche. Nchịkọta nyocha enweghị ike iji data ọnụahịa data na ọnụ ọgụgụ akụkọ ihe mere eme, ebe nyocha nyocha nwere ike, ma na-eme. Site n'inyocha akụkọ ihe mere eme gara aga nke omume ọnụahịa, nyocha nyocha nwere ike ile anya n'ọdịnihu, yana ohere ka mma nke ịkọwa amụma azụmaahịa na ọnụahịa ego na-abịa n'ikpeazụ.
A na-ekwenyekarị na ụkpụrụ ọnụahịa nke oge gara aga na-emecha megharịa onwe ha ma emesịa. Mgbe ị na-ekpebi ma ị ga-abanye ozi ije, a na-ahụta ya dị oke aka n'etiti ndị ahịa azụmaahịa. Ebumnuche bụ isi nke nyocha nyocha bụ ịmụ ihe ọmụma dị ugbu a banyere ọnụahịa nke akụ, kama ilekwasị anya na nyocha ọnụahịa nke ọnụahịa.
Pricedị ọnụahịa ahụ ga-ekwupụta mgbe niile site na nyocha nke ọkọnọ na ọchịchọ na ahịa.
Nke a bụ isi okwu nke nyocha teknụzụ:
Have nwere nghọta ka mma banyere ihe ndị ahịa sonyere nwere ike ime ọzọ.
Ndị na-azụ ahịa nwere ike ile anya ma ịzụta mmasị na ire ere na-abawanye / na-agbada.
N'ihi mgbanwe mgbanwe ọnụahịa ị hụrụ na nso nso a, ị nwere ike nweta nghọta ka mma banyere ebe onye na-azụ ahịa na ndị na-ere ahịa nwere ike ịnọ.
Ndị a bụ isi ihe atọ dị mkpa nyocha na-adabere na:
N'ihi ndị na-azụ ahịa na ndị na-ere ahịa n'ahịa, ọnụego ọmụrụ nwa, na akụkọ gbasara ọrụ ga-etinye n'ime ọnụahịa ahụ ka ọ bụrụ eziokwu. Ahịa ahụ na-egosi ihe niile ala, ọbụlagodi ọnọdụ akụ na ụba (aka isi) gụnyere na ego ụzọ ego.
A na-ekwenyekarị na usoro ọnụego oge gara aga ga-emecha laghachite, ya mere, ọ bara uru ile anya n'oge gara aga yana usoro ndị dị ugbu a.
Nddị na ọnụego na-agagharị nnweta na mkpịsị aka gị.
Gini mere nyocha nke teknụzụ ji baa uru?
isi Ebumnuche nke oru nyocha bụ:
Iji nyochaa ọnụ ọgụgụ yana iji nweta uru na-agbanwe agbanwe site na azụmaahịa, yana inyocha usoro ọ bụla na-apụta n'ahịa.
Ahapụ ntụgharị uche nke uche, ma nyere gị aka ịme mkpebi amamihe na agụmakwụkwọ.
Nyocha teknụzụ na-enyere gị aka ịghọta mgbe ịbanye na ịpụ ahịa bụ ezigbo echiche. Ihe niile gbasara oge, mgbe ahịa malitere ịgbanwe, nyocha nyocha ga-ama.
Nyocha teknụzụ na-eji eserese ọnụahịa na / ma ọ bụ okpokolo agba iji mee ka ọ nwee ike ịhụ ihe na-eme, na-akwado nkwado nke ahịa. N'ihe banyere uzo ahia n'onwe ya, enwere uzo ato di ugbu a, ha di ka ndi a:
N'ezie, ọnụahịa ga-agagharị na usoro zig-zag, yabụ omume ọnụahịa ga-enwe naanị ọnọdụ abụọ.
nso: Ọnụahịa ga-emepụta ọdịdị zig-zag, n'akụkụ akụkụ.
Ụdị: Ahịa ga-zig-zag nke ka elu na 'uptrend' ma wedata na 'downtrend'
Ngwa 3 kachasị eji nyocha teknụzụ bụ:
Patternskpụrụ Chart: Site na ịchọpụta usoro eserese buru ibu, ha nwere ike ịkọwa ebe ọnụahịa nwere ike ịga.
Omume ego: Emezuru site na nyocha mmegharị ọnụahịa akụkọ ihe mere eme, ihe ọnụahịa gụnyere ịdepụta eserese iji kọwaa ụzọ ahịa si aga, yana n'ezie - na ụzọ dị a .aa.
Nka na ụzụ na-egosi: Site na iji ngwaọrụ na usoro ịkọwapụta ọnụ ọgụgụ ị nwere ike ịre na ịzụta akara.
N'ihe niile, nyocha teknụzụ bụ ngwaọrụ dị mkpa, na-enyere gị aka ịhọrọ ahịa na nsogbu kachasị mma ma hụ ihe ọ bụla nwere ike ime. Enweghi ike iji njikwa ihe egwu dị na-abaghị uru agaghị enweta ya.
Kpụrụ Chaatị - kọwara ya
Basickpụrụ bụ isi nke nyocha nyocha bụ ojiji nke eserese eserese. A ga-egosiputa usoro ọnụahịa site na iji ọtụtụ ahịrị na / ma ọ bụ akụkụ (usoro eserese ahụ), usoro ndị a bụ isi ihe na-aga nke ọma na nyocha ọrụ aka.
Ndị ahịa nwere oge nwere ike ịhụ ọdịiche dị iche iche na ọnụahịa akụnụba. Ihe eji eserese eji eme ihe bu:
Isi na usoro ubu
Chọpụta na ịmara onwe gị na usoro ndị a nwere ike ime ka o nwekwuo ike ịkọ amụma ụzọ ahịa ga-aba. Oge ihe osise eserese nwere ike ịdị iche nke ukwuu ma nwee ike ịdabere na sekọnd, nkeji, oge ma ọ bụ ọnwa. Kpụrụ a dabere na ọnụ ọgụgụ ndị nọ n'ahịa na-a payinga ntị na ha.
Chartkpụrụ eserese a na-ejikarị na-eji triangles, ọkọlọtọ na pennants - patternkpụrụ ahụ na-enyere ndị ahịa aka ịga n'ihu na-eme. Chartkpụrụ eserese na-agbali ịchọpụta ohere iji zụọ ahịa na ngbanwe nke otu ụdị ọnụahịa.
Nakwa igosi ozi dị mkpa dịka mmetụta nke ahịa na uru ziri ezi, ọ na-enyocha klaasị ọ bụla. Offọdụ n'ime klaasị akụ a na-enyocha eserese eserese bụ ego, ebuka na mkpuchi iji kpọọ ole na ole.
Ya mere ugbu a na anyị ekpuchiwo isi, na-esote ngalaba nke anyị price edinam trading PDF anyị na-aga na mkpa nke akparamaagwa mgbe erekwa.
Psychology Behind Chart ternkpụrụ
Rtkpụrụ Chart na-adabere kpamkpam na akparamaagwa ahịa. Suppnweta ma chọọ na-arụ ọrụ dị mkpa mgbe a bịara n'otú e si kee usoro eserese eserese. Nrụgide mgbe ị na-azụ ma na-ere ahịa na-enyere aka ịmepụta usoro eserese ahụ, yabụ na tiori, ọ baghị uru oge ị ga - ejedebe azụmaahịa n'ihi na ụmụ mmadụ na - etinye iwu ọ bụla n'ihu.
Ndepụta dị n'okpuru na-enye nkọwa dị mfe nke oge dịnụ mgbe ị na-azụ ahịa na usoro eserese:
Oge ọnwa ma ọ bụ kwa izu dị mma maka azụmaahịa ọnọdụ.
Eserese 4-awa na eserese kwa ụbọchị dị mma na-azụ ahịa
Eserese 5 ruo 15 (nke a maara dị ka eserese intraday) bara uru maka ahia ụbọchị.
Lezienụ anya maka omume dị elu n'oge oge ị họọrọ
Ozugbo ịchọputara akara kachasị, ị ga-enwe ike iwepụta oge ahịa site n'ịmụ usoro eserese ahụ.
Ọ gwụla ma ị nwere usoro guzosiri ike, ọ bụghị ezi echiche ịzụ ahịa kpamkpam dabere na usoro ọnụahịa a hụrụ, ebe nke a bụ nha nke azụmaahịa dabere na mmetụta gị, nke nwere ike ịbụ adịghị ike n'ịzụ ahịa.
Ahịa Ahịa Ahịa - Ndị Kachasị Mma Brokas & nyiwe
Ebe ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na njedebe nke ọnụahịa anyị na-ere ahịa PDF, ị kwesịrị ị nwere ugbu a ezigbo nghọta nke ihe ọnụahịa ahịa ahịa bụ maka. Ahịa ahịa ahịa bụ atụmatụ ndị ahịa nwere ahụmahụ na-eji dị ka ogologo oge, yana obere oge, ịbịaru ahia.
Ugbu a, anyị ga-enye gị ntakịrị ozi gbasara 5 ndị ​​na-ere ahịa aha ọma nke bara uru oge gị. Onye otu anyi jiri nlezianya ahọrọ nke ọ bụla n'ihi ụgwọ dị ala na ọtụtụ klas klas ịhọrọ. Nke kachasị mkpa, onye ọ bụla na-ere ahịa na-achịkwa ya nke ọma, yabụ na ego gị nwere nchekwa mgbe niile.
1. eToro - Ebe ahia kacha mma maka ndị na-amalite
Onye na-ere ahia a bụ ngọngọ mmalite dị egwu maka gị nke bụ ndị mbido mgbe a bịara n'ịzụ ahịa.
Ikpo okwu na-eme ka itinye ego na ịzụrụ na ire akụ dị mfe ma n'egbughị oge, ị ga-adị njikere ịmalite ịzụ ahịa. eToro nke anaghị akwụ ụgwọ ụgwọ azụmaahịa (ewepụ ma gbasaa) yana ọ na-achịkwa ya site na usoro ikikere atọ.
4. AVATrade - Ego nnabata 20%
Ozugbo ị dị njikere imeghe ezigbo ego ma bido ịzụ ahịa n'ime ahịa ndụ, ọ bara uru ịkọ na AVATrade na-enye mgbasa dị oke ala, ọ naghị atụ anya ka ọrụ azụmaahịa.
Ihe nnabata ngwugwu n’elu ikpo okwu a d ị nnukwu mma na 20% nke enyere $ 10,000.
Actionzụ ahịa ego na-egosiputa azụ iji nweta usoro azụmaahịa. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ọ bụchaghị ezigbo echiche ịdabere naanị na usoro ọnụahịa ndị gara aga, ma ọ bụ itinye uche na nke ugbu a.
Olileanya, na njedebe nke ọnụahịa anyị na-ere ahịa PDF, ị ga-enwe nghọta ka mma banyere ihe ọnụahịa azụmaahịa bụ, yana ihe kpatara ịghọta mkpa ọ dị mkpa ga-enyere gị aka ma a bịa n'inwe ihe ịga nke ọma ọdịnihu na ahia.
Kedu akụ ahịa azụmaahịa na-arụ ọrụ?
Actionzụ ahịa ego na-eche maka ọnọdụ, ọ bụghị ngwa ego mmadụ. Dị ka ndị dị otú a, ma ịchọrọ ịzụ ahịa, ndeksi, cryptocurrencies, Forex, ma ọ bụ ngwaahịa - ịzụ ahịa ọnụahịa bụ ngwá ọrụ bara uru bara uru ị nwere.
Kedụ ka m ga - esi lelee atụmatụ azụmaahịa m na - eme?
Anyị ga-atụ aro ka ịmepe akaụntụ imebi ma jiri ya rụọ ọrụ ya. N'ime ime nke a, ị ga-eme ihe ị na-eme n'ahịa na-etinyeghị ego gị.
Omume ahia ọ na-adabara obere ma ọ bụ ogologo oge?
Omume ọnụahịa ọ na-azụ ahịa bụ otu ihe nyocha teknụzụ?
No, price edinam trading abụghị otu ihe ahụ dị ka oru analysis. Mana, nyocha teknụzụ bụ akụkụ dị mkpa mgbe ị na-ere n'ịntanetị, yabụ ị ga-eji oge ụfọdụ mụta ka esi arụ ọrụ.
Kedu ihe bụ ihe egwu dị na azụmaahịa ahịa?
Dị ka aha ahụ na-egosi, mmetụta mmetụta ihe egwu na-anwa ịchọpụta etu ahịa si enwe mmetụta. Nke ahụ bụ ịsị, usoro a na-ele anya iji hụ ma ọ bụrụ na ahịa sara mbara na-enwe obi ike (site na ịzụrụ ihe ndị dị ize ndụ) ma ọ bụ ụjọ (site na ịzụta akụ dị mma).
Kedu ebe nchekwa dị n'ahịa ahịa na-achọ?
N’akụkọ ihe mere eme, ebe nchekwa ga-agụnye dollar US, Akụ US, nchekwa gọọmentị, ọla edo, na Switzerland franc.
Nke a bụ ajụjụ gbasara onwe ya, ebe ọ bụ na a ga-enwe mmadụ abụọ mgbe niile na-ele ọnụahịa ahịa ahịa dị iche iche. Nke ahụ bụ ịsị, ndị ahịa abụọ nwere ike ịkọwa echiche ahịa n'ụzọ dị iche!